‘स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा फस्ट डिभिजन ल्याएँ जस्तो लाग्छ’ (अन्तर्वार्ता) मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने कुनै पनि योजना नै थिएन। विना योजना नै म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेको हो। किनकी गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय कसलाई भाग पर्ने ? मेरो पार्टीको भागमा परेपनि को मन्त्री भएर जाने भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। आइतबार, जेठ २२, २०७९
कोभिड महामारीपछिको नेपाली औषधि बजार: चुनौती र अवसर (अन्तर्क्रिया) कोभिड महामारीले नेपाली औषधि बजारमा के कस्ता समस्या ल्यायो? महामारीले समस्यासँगै अवसरको पनि ढोका खोलेको साथै धेरै कुरा सिकाएको औषधि उत्पादकहरुले बताउँदै आएका थिए। यही सेरोफेरोमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले ‘कोभिड महामारीपछिको नेपाली औषधि बजार: चुनौती र अवसर’ विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। मंगलबार, जेठ १०, २०७९
डा पुनसँग भिडियो वार्ताः मंकीपक्स भाइरस नेपाल भित्रिने जोखिम कति? मंकीपक्स नेपालमा रहेका बाँदरहरुबाट सर्न सक्छ? मंकीपक्स भाइरस कस्तो प्रकारको भाइरस हो? यो नेपालमा भित्रिने वा फैलिने जोखिम कस्तो छ? मंकीपक्सको कारण, लक्षण तथा उपचारबारे हामीले डा पुनसँग कुराकानी गरेका छौं। सोमबार, जेठ ९, २०७९
बालबालिकाको स्याहारदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्म यथेष्ठ लगानी गर्न आवश्यक छ: प्राध्यापक रब मुडी [भिडियो वार्ता] स्वास्थ्यखबरको विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा प्रोफेसर मुडीले कुनै पनि देशले स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन्। मंगलबार, वैशाख २७, २०७९
‘नेपालमै धेरै उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र विदेशबाट ल्याउनुपर्छ’ एक्स्पोको तयारी कहाँसम्म पुग्यो? एक्स्पोको उद्देश्य के हो? नेपालमा औषधि बजारको अवस्था के छ? लगायत विषयमा हामीले एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालसँग कुराकानी गरेका छौँ। बिहीबार, वैशाख ८, २०७९
प्राडा गणेश दंगाललाई प्रश्नः नेपालका महिलाहरुमा धेरै देखिने प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु के–के हुन्? नेसोगका अध्यक्ष प्राडा गणेश दंगालसँग सम्मेलन र प्रसूति तथा स्त्री रोगसँग सम्बन्धित विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः शुक्रबार, चैत १८, २०७८
गर्भावस्थामै बच्चाको रोग तथा स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउने ‘फिटल मेडिसिन’ के हो? फिटोस्कोपिक सर्जरीको सेवा पनि नेपालमा छैन। यसमा पाठेघरभित्र दुरबीन पठाएर सर्जरी गरिन्छ। यो सँगै गर्भभित्रै गरिने सर्जरीहरु पनि नेपालमा सुविधा छैन। बिहीबार, चैत १७, २०७८
प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा तिवारीलाई प्रश्नः प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय किन? प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र काम के कस्ता छन्? प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेका काम, नीति तथा योजनाका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा श्रीराम तिवारीसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः मंगलबार, चैत १५, २०७८
बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ? बालबालिकामा हुने क्यान्सर कस्तो खालको क्यान्सर हो? नेपालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको अवस्था र उपचारमा पहुँचको अवस्था के छ? क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? क्यान्सरको उपचार गर्न कति समय लाग्छ? मंगलबार, फागुन ३, २०७८
डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता: कोरोना बढ्दै जाँदा क्यान्सरका बिरामीले कसरी पाउँदैछन् उपचार? कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउन हुँदा र अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा क्यान्सरका बिरामीहरुले समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न नसकेको तथा उपचार पाउनबाट बञ्चिन हुनुपरेको थियो। जसले गर्दा क्यान्सर ‘ओभरस्टेजिङ’, क्यान्सर फेरि बल्झिएको अवस्थामा आइपुगेको डा कार्कीले बताए। शुक्रबार, पुस ३०, २०७८
परिवार नियोजन सेवाको बुझाई अझै पनि साँघुरो छ - कविता अर्याल स्वास्थ्यको महत्व स्वास्थ्य क्षेत्रका र परिवार नियोजन सेवाको महत्व यही क्षेत्रमा काम गरेकाहरुले बुझेका हुन्छन्। र, थाहा पनि हुन्छ। ठिक छ, जनप्रतिनिधिलाई यो विषयमा थाहा छैन। तर उनीहरुलाई हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले थाहा दिनुपथ्र्यो। स्वास्थ्य संरचनामा हाम्रो त्यो किसिमको दरबन्दीहरु भएन। स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी हुन आवश्यक छ। शुक्रबार, मंसिर २४, २०७८
सदस्य सचिव काफ्लेलाई प्रश्न: मापदण्डमा सिटिइभिटीले आँखा चिम्लिदा नै नर्सिङ कलेजमा अहिले समस्या देखिएको हो? सिटिइभिटीले त ५० बेडको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा पुग्छ भन्ने नै हो। आँखा चिम्लियो भन्ने होइन। केही कलेजहरुले अस्पतालहरु बनाउनुपर्नेमा नबनाएको भन्ने पक्कै हो। शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख खड्कालाई प्रश्न: प्युठानमा कोभिड खोप कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ? यहि मंसिर ९ देखि १५ गतेसम्म प्युठानमा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य अनुसार खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
सिओपिडी निर्मुल हुँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छः डा निरज बम (भिडियो वार्ता) डा बमका अनुसार नसर्ने रोगहरुबाट विश्वमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यो मृत्युको कारक मानिएका प्रमुख रोग मध्ये सिओपिडी पनि एक प्रमुख कारक तत्व हो। बुधबार, मंसिर १, २०७८
युवाहरुमा मधुमेहको समस्या किन बढ्दैछ? जोगिने कसरी? डा मल्लसँग भिडियो वार्ता मुख सुख्खा हुने, दुब्लाउँदै जाने, आँखा धमिलो हुँदै जाने, गिजाहरु पाक्ने, शरीरको तौल कम हुँदै जाने, शरीरमा चिलाउने समस्याहरु हुने, झम्झमाउने, पोलेजस्तो हुने, घोचेजस्तो हुने र घाउहरु आउने, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने समस्याहरु हुनसक्छ। आइतबार, कात्तिक २८, २०७८
कोभिडसँगै पोष्टकोभिड र ननकोभिड सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं: डा पोखरेल [अन्तर्वार्ता] नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्नैपर्छ। हाम्रो अहिलेको प्रक्षेपणमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार चैतसम्म खोप लगाउनुपर्ने सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्छौं भन्ने छ। बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८
कोभिडका डरका कारण समयमा नै क्यान्सर उपचार नगर्दा तेस्रो र चौथों स्टेजमा पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्यो: डा प्रजापति महामारीको समयमा कोरोनाको डरले गर्दा जचाउन जानै छाडे। क्यान्सर पत्ता लागेपछि किमोथेरापी, रोडियोथेरापी गराइरहेका बिरामीहरु समेत काठमाडौं आउन धेरै डराए त्यतिबेला। कतिले बीचमा उपचार छाडे। बुधबार, असोज २७, २०७८
स्वास्थ्य अनुसन्धानमा सरकारले लगानी र दायरा बढाउन आवश्यक छ: डा प्रदीप ज्ञवाली [भिडियो वार्ता] परिषदले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित के कस्ता अनुसन्धानका काम अगाडि बढाइरहेको छ? यसरी भएका अनुसन्धानको नतिजा कस्तो देखिएको छ? बुधबार, असोज २०, २०७८
काम गर्न आएको हुँ, काम गरेर देखाएपछि विरोधीहरु पनि चुप लाग्छन्: राज्यमन्त्री श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता) म मन्त्रीको दौडमा भएको व्यक्ति होइन। मलाई काम गर्न दियो भने म काम गर्छु। दिएनन् भने पनि मलाई दुख छैन। पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त्यही अनुसार काम गर्छु। शुक्रबार, असोज १५, २०७८
डा अमृत जैशीसँग भिडियो वार्ता: बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्खास्तीको माग राख्नुको कारण के हो? प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन, आन्दोलनरत पक्षका माग, सरकारसँग माग पुरा गर्ने क्रममा भएका सहमति लगायतका विषयमा गरिएको भिडियो कुराकानी। बिहीबार, असोज १४, २०७८
‘एनएमए राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन’ किन गरिँदैछ? मुख्य विषय के–के छन्? डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता सम्मेलनमा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरी निस्कने निचोडलाई कार्यपत्र बनाइ सरकारलाई सुझावको रुपमा पेस गर्ने संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले बताए। बिहीबार, असोज ७, २०७८
सचिव डा पोखरेललाई प्रश्नः स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गरेनन् भन्ने आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? प्रशासन तर्फका सचिवहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गरेनन् भन्ने आरोप लगाउन थाले। यी सबै आरोपलाई चिर्न आफूले काम गरिरहेको सचिव डा पोखरेलले बताए। उनले स्वास्थ्य प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले स्वास्थ्य सेवा तर्फकै सचिव हुनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिए। सोमबार, असोज ४, २०७८
भ्रुणमा नै मुटुको समस्या पत्ता लगाउने प्रविधिको पर्याप्त प्रचार भएन नेपालमा फेटल इको कार्डियोग्राफी सेवा भित्रिएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि नेपालमा यो प्रविधिबारे धेरै प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। भ्रुणको मुटुको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिने यो एक प्रकारको अल्ट्रा साउन्ड हो। सोमबार, भदौ २१, २०७८
नसर्ने तथा मानसिक रोग बढ्दो छ, अहिलेको संरचनाले सम्बोधन हुँदैन: डा फणिन्द्र बराल [अन्तर्वार्ता] ६० वर्ष माथिका व्यक्तिलाई नसर्ने रोग लागे सामान्य मान्न सकिन्छ। तर, हाल युवाहरुलाई पनि नसर्ने रोग लागिरहेको छ। ४० वर्षमाथिका व्यक्तिमा ह्रदयघात, मस्तिष्कघात, मधुमेह, उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको छ। बुधबार, भदौ १६, २०७८
'मोबाइल/कम्प्युटरमा निरन्तर २० मिनेट हेरेपछि २० सेकेन्ड २० फिटको दूरीभन्दा पर हेरौं' [अन्तर्वार्ता] कोरोना संक्रमणकै कारण नभएपनि यसको प्रभावले आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रका पनि असर पारेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आजभोलि गाउँगाउँमा आँखा शिभिरका कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। मंगलबार, भदौ १५, २०७८